मैले किन किशोर प्रधानको टिमलाई नै रोजें ? सौरभ ज्योतिसँगको अन्तरवार्ता| Corporate Nepal
मैले किन किशोर प्रधानको टिमलाई नै रोजें ? सौरभ ज्योतिसँगको अन्तरवार्ता
साउन १, २०७७ बिहिबार १३:३१
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी बढेर गएको छ । संभवतः यही आउँदो साउन २६ गते हुने निर्वाचनका लागि महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षद्धय किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल टिमसहित चुनावी तयारीमा जुटेको अवस्था छ । महासंघले प्रस्ताव गरेको मितिमा महासंघको साधारणसभा सम्पन्न गर्न सरकारले अनुमति दिइनसके पनि दिने संभावना भने देखिन्छ । यसै निर्वाचनमा उदयमान एक युवा व्यवसायी सौरभ ज्योतिले किशोर प्रधानको समूहबाट आफूलाई एशोसियट उपाध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना ज्योति समूहका सौरभ अहिले उपाध्यक्ष हुँदै अर्को पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्ष हुने योजनामा छन् । यसै निर्वाचनका सन्दर्भमा उनीहरुसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छः
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको प्रतिकुल परिस्थितिमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ । तपाईं पनि एउटा उम्मेवार । कस्तो छ चुनावी तयारी ?
हामीले चुनावको तयारी झण्डै नौ महिना अघिदेखि सुरु गरिसक्याथ्यौं । बीचमा कोभिड आइदियो । हामीले हाम्रो टिमबाट पनि छ महिना अघिदेखि तयारी गरिसकेका थियौं । यो टिम इफोट हो । तयारी राम्रै भइरहेको छ ।
तपाईंहरुले तोकेकै मितिमा चुनाव हुन्छ त ?
चुनावको मिति तोकिसकिएको छ । महासंघले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । अझै पनि महामारीको स्थिति सामान्य भइनसकेको अवस्थामा हामी सरकारसँग समन्वय गरेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रयास गछौं । कोभिडकै कारण केही अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो, गाह्रो भयो, स्थिति असामान्य भयो वा फेरि लकडाउन कडाई भयो भने अकै कुरा हो । सरकारको नियम र निर्देशन विपरित गर्ने कुरा हुन्न । स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । सबै सदस्यहरुको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व महासंघको पनि हो । अहिले हेर्दा स्थिति सहज बन्दै गएको छ । यो हेर्दा साउन २६ मा चुनाव हुन्छ । चुनाव हुने हिसावले नै सबै काम भइरहेको छ ।
तपाईंहरु खुलेरै दुई वटा प्यानलमा चुनावी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले किशोर प्रधान प्यानललाई रोज्नुभयो । किन अर्को प्यानल रोज्नुभएन् ?
हाम्रो त्यस्तो प्यानल छैन् । म त्यस्तै प्रतिस्पर्धी भनेर पनि मान्दिन । किन भने म आफू आफ्नै प्रतिस्पर्धी हो । मैले हिजो जति काम गरेको छ, भोलिका दिनमा अझै राम्रो र लगनशील भएर, अझै मेहनत गरेर, समग्र अर्थतन्त्र र आम व्यवसायीको हकहितको लागि एशोसियट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दावी गरेको हो । महासंघमा मेरो अनुभव चार कार्यकाल भइसक्यो । १२ बर्ष । हुन त मलाई युवा भन्छ । तर मेरो अनुभव र कार्यकाल हेर्यो भने अरुभन्दा अग्रज हो । उमेरमा कम होला । महासंघमा युवा व्यवसायीहरुलाई आकर्षिक गर्नेगरी मैले सुरज वैद्य हुँदा नेपाल युवा उद्यमी मञ्च लिंक गरेको महासंघमा । त्यहीं मैले छ बर्ष बिताएँ । दुवैतिर जोड्ने हो भने १८–२० बर्ष भयो । महासंघमा मैले गुणस्तर, क्वालिटि कन्ट्रोल र कम्प्लाइन्समा धेरै नै काम गरें । त्यसपछि मैले एफएनसीसीआई नेशनल एक्सलेन्स अवार्ड भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अवार्ड तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित विभिन्न प्रधानमन्त्रीको हातबाट प्रदान गरियो । त्यसपछि मैले कर राजश्व समिति सम्हालें । बजेट र करको विषयमा धेरै छलफल गरियो । धेरै समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गरियो । त्यसमा हामी सफल पनि भैयो । अहिले पनि हामी धेरै समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका छौं । अहिले आएर म बैंक र वित्तीय संस्थासँग सम्वन्धित इशुहरुमा, मौद्रिम नीतिको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग धेरै अन्तरक्रिया र छलफल गरिरहेका छौं । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरु कसरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने ? कसरी यसलाई चलायमान बनाउने ? र भविश्यमा कोभिडबो असरबाट बाहिर निस्किन छोटो समयमा राहतहरु ल्याएर कसरी रिभाइभ हुने ? त्यो तिर लागिरहेका छौं ।
महासंघमा प्रतिस्पर्धी भनेको एउटा हो । चुनाव भनेको डेमोक्राटिक प्रोसेस हो । हुनुपनि पर्छ । तर मेरो दावी चाहीं जुन टिम अहिले आएको छ, किशोर दाईको टिम.....टिम भन्दा कस्तो हुन्छ भने त्यसमा माइण्डसेट पनि मिल्नुपर्यो । टिमओर्क पनि हुनुपर्यो । यी दुवै कुरा मिलाएर आगामी दिनमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो भिजन हो । अब आउने जुन टिम हुन्छ महासंघको, त्यो टिम एकदमै डायनामिक, फरवार्ड थिङकिङ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्न र विजनेश रिभाइभ गर्न कंक्रिट प्लान भएको, जसले अर्थतन्त्र जोगाउन सकोस, त्यस्तो टिम अब महासंघलाई चाहिन्छ । यो टिम (किशोर प्रधान नेतृत्वको) जो अहिले हामीसँग छ, यसले डेलिभर गर्न सक्छ । मेहनत गर्छ । खट्छ । निजी क्षेत्रको हकहितका लागि काम गर्नसक्ने क्षमता भएको टिम हो । त्यही भएर यो टिमको अलाइनमेन्ट भएको हो । कुनै राजनीतिक विषयबाट प्रभाव परेर यो टिम बनेको होइन् । मेरो हिसावले यो टिम राम्रो टिम हो । काम गर्ने टिम हो ।
हुन त तपाईंले राजनीतिक प्रभावमा टिम बनेको होइन् भन्नुभयो । तर महासंघभित्र निकै ठूलो राजनीति हुन्छ । आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा छ । त्यो कुरालाई तपाईंले कसरी प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ ?
अवश्य राजनीति छ । टिमको अलाइनमेन्टमा एउटा माइण्डसेटको कुरा हो । कसरी टिममा काम गर्ने ? त्यहाँ अध्यक्ष मात्रै आएर पनि सुधार हुन सक्दैन् । सुधारका लागि टिमले नै काम गर्नुपर्छ । अध्यक्षको विपरित कार्यसमितिमा काम हुनथाल्यो भने त्यहाँ समस्याहरु आउँछन् । विकृतिहरु देखिन थाल्छन् । समग्र निजी क्षेत्रको हकहित र महासंघलाई सशक्त बनाउँदै लैजान अलाइनमेन्ट चाहिन्छ । त्यो टिममा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यसमितिका सदस्यहरु सबै आउनुपर्छ । त्यो टिमलाई स्थापित गर्न हामीहरु लागिरहेका छौं । तपाईंले भनेजस्तो अवश्य पनि राजनीति छ भित्र । तर पनि यो टिम राम्रो छ भन्ने मेरो धारणा हो । मैले साथीहरुसँग काम गरेको, उहाँहरुको क्षमता देखेको हुनाले म यस टिममा आवद्ध भएको हो । राजनीतिको कारणले होइन् । दोस्रो किन म आवद्ध भएको भने महासंघ भनेको राजनीति गर्ने संस्था होइन् । राजनीति गर्ने भने राजनीतिक दलमा लाग्नुपर्छ । महासंघ भनेको डेलिभर गर्ने, काम गर्ने, अर्थतन्त्र जोगाउने, उद्योग व्यवसायको हकहितका लागि लड्ने संस्था हो । त्यसकारणले महासंघलाई राजनीतिमुक्त गर्नुपर्छ । र, प्रोफेशनल मानिसहरु आउनुपर्छ । सेक्रेटरियट पनि प्रोफेशनल हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा सरकारलाई सुझाव दिने र ग्रासरुटका देखि ठूला उद्योगसम्मको हकहितका लागि हामी लड्छौं ।
भनेपछि विगतमा महासंघका बैठकहरुमा देखिने आरोप प्रत्यारोप, नोट अफ डिसेन्ट जस्ता विकृतिहरु भोलिका दिनमा दोहोरिन दिन्नौं, तपाईंहरुको टिम विजयी हुँदा महासंघ स्वस्थ ढंगले अघि बढ्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिलेको चुनाव नै त्यसैको लागि हो । त्यसैको लागि लडाईं भइरहेको हो । त्यहाँ पक्षविपक्ष भएर आर्थिक बहस हुनुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक राजनीतिको कुरा मात्रै, पदको कुरा मात्रै, आरोप प्रत्यारोप मात्रै भइरह्यो । समय बर्बाद भइरहेको छ । उद्देश्यबाट हामी बाहिर गइरहेका छौं । महासंघको उद्देश्य त्यो होइन नि त । कार्यसमितिमा एउटै एजेण्डा हुनुपर्छ कसरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ? कसरी जीडीपी ग्रोथ गराउने ? कसरी रोजगारी बढाउने ? पोलिसिगतरुपमा हाम्रा विभिन्न क्षेत्रका समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? निजी क्षेत्रको संरक्षण के कसरी गर्ने ? उनीहरुको सुरक्षा कसरी गर्ने ? भन्ने हो । त्यसैका लागि नै अहिले चुनाव भइरहेको हो ।
कोभिड १९ र लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा छ । तपाईंहरु चुनावी हारजितको दौडमा रहँदा अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ? भन्ने विषयमा पनि बहस चलाउनुपर्ने होइन् ?
अवश्य पनि । महासंघले अहिलेका चुनौतिका विषयमा निरन्तर छलफल र बहस पनि गरिरहेका छौं सम्वद्ध व्यक्ति संस्थाहरुसँग । अहिले व्यवसायीहरुले भोगेका समस्या र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी रिभाइभ गर्ने ? भन्ने कुरामा छलफल गरेर महासंघको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । हाम्रो सक्रियता नै अहिले त्यसैमा छ । अर्को कुरा
हामी एउटा त अहिले विषम परिस्थिति भएको हुनाले सबैभन्दा चुनौतिमा हुन्छ अबको नेतृत्व, जो आए पनि । त्यो चुनौतिको सामना गर्न हामीसँग रोडम्याप पनि छ । हाम्रो भावी अध्यक्ष (शेखर गोल्छा)ले पनि भन्नुभएको छ, ‘आर्थिक सुधारका लागि हामी अध्ययन गरेर १० बर्षको रणनीति ल्याउँछौं ।’ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर पाँच बर्षमा कहाँ पुग्ने ? कोभिडको कारण कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? त्यो क्षेत्रलाई राहत दिन के के गर्नुपर्छ ? कसरी हामी आत्मनिर्भर हुने ? त्यो तिर हामी लङ्टर्म रोडम्याप लिएर अघि बढ्छौं । यही रोडम्यापका आधारमा आउँदो तीन–चार कार्यकालसम्म अलाइनमेन्ट बनाएर काम गछौं । तपाईं नै सोच्नुस् न । अध्यक्षको रणनीति एउटा छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्को आयो भने कसरी काम हुन्छ ? हामीले सरकारलाई पनि त्यही नै भनेका छौं । आर्थिक विकासको भिजन भनेको लङटर्म हुनुपर्छ । बर्षौंबर्षको । जोसुकै नेतृत्व आए पनि एउटै दिशामा आर्थिक विकास गर्न अघि बढ्नुपर्छ । महासंघमा पनि हामीले त्यही अलाइनमेन्ट गरिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न अघि बढ्ने क्रममा यसपछिको तपाईंको तयारी के हो ?
म आउन लागेको उपाध्यक्ष एशोसियटमा । त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जान्छु । त्यसपछि अध्यक्षकै लाइनमा जाने हो । त्यही अलाइनमेन्ट र सक्सेशन प्लानिङका आधारमा म पनि काम गर्छु र मैले आफ्नो योजना पनि बनाएको छु । महासंघ ठूलो संस्था पनि हो । सरकारपछिको ठूलो सञ्जाल भएको संस्था । तर एजेण्डाको आधारमा हाम्रो अल्ली सुनुवाई नभएको अवस्था छ । बढि राजनीति भएको छ । त्यो हुनाले त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा टिमभित्र मेरो सशक्त भूमिका हुन्छ ।
नेतृत्वलाई अर्को पनि आरोप लाग्ने गर्छ ठूला व्यवसायीले हामी सानालाई हेरेनन् भनेर । त्यो खालको आरोप भोलिका दिनमा लाग्दैन भन्न सकिन्छ ?
अवश्य पनि लाग्दैन । किनभने महासंघ भनेको ठूला व्यवसायीको मात्रै होइन् । अरु संस्था होइन् । उनीहरुले ठूलालाई मात्रै हेरिरहेका छन् । कसैले मझौलालाई मात्रै हेर्छ । महासंघ सबै साना ठूला व्यवसायीको संस्था हो । त्यो भएकोले सबैलाई हकहितका लागि सन्तुलित ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिपनि रहेका छौं हामीले । पाँच दशकभन्दा लामो महासंघको यात्रामा सबैलाई समेटेर नै काम भइरहेको छ । ठूलो संस्था भएकाले गुनासोहरु हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बरु कमिकमजोरी सुधार गर्दै लैजाने हो ।
‘निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन बजेटबाटै हुन्छ’
‘महालक्ष्मी लाइफ कहिल्यै पनि नक्कली बीमाको धन्दा गर्दैन’
चैत २४, २०७७ मंगलबार
सेयर बजारमा १० कित्ते प्रावधान हटाउने होइन, बरु ५ कित्ते प्रावधान लागू गर्नुपर्छः पन्थी
जापानका भूकम्प प्रभावितलाई नेपालीले दालभात पकाएर खुवाएका थिएः जापानी राजदूत
चैत १४, २०७७ शनिबार
वाइडबडीको लगानीमा सरकार जमानी छ, हामी ढुक्कै छौंः रमन नेपाल
जसरी बैंकिङ र पुँजीबजारको हिस्सा बढ्दै छ, त्यसरी नै बीमा क्षेत्रको पनि बढाउँछौंः सिलवाल